Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Rio Ferdinand Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na -egosi Full Story of a Man United Legend onye amara aha ya mara; "Ferdz".
Anyị Rio Ferdinand Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha nke Rio Ferdinand Biography gụnyere Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, nzụlite ezinụlọ, Nwunye Late (Rebecca Ellison), Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Ụmụaka Juan Mata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ichebe onwe ya mana ole na ole na-ele Rio Ferdinand's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Rio Ferdinand nke --mụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Rio Gavin Ferdinand na 7th nke Nọvemba 1978 na King's College Hospital, London, United Kingdom. A mụrụ ya nne Irish nwụrụ anwụ, Janice Lavender na nna Saint Lucian, Julian Ferdinand.
Nne Ferdinand dị naanị afọ 17 mgbe ọ nwere ya. Ferdinand toro n'akụkụ nwanne ya nwoke, Anton, na Peckham. Otú ọ dị, o nwere nnukwu ezinụlọ.
Nne na nna ahụ rụsiri ọrụ ike iji kwado ezinụlọ. N'oge ahụ, nne ya nwụrụ anwụ bụ onye na -elekọta ụmụaka na nna ya bụ onye na -akwa akwa.
Gwa eziokwu. Ndị nne na nna Ferdy alụghị di ma ha kewapụrụ mgbe ọ dị afọ 14. Tupu nkewa, ndị otu abụọ kwere nkwa na ha ka ga -anọ ụmụ ha nso.
Scott McTominay nwata Akụkọ Plus na-enweghị ihe ọmụma akụkọ
Ọ bụ nna Ferdy, Julian bụ onye na -elekọta ụmụ ya. Ọ kpọgara ezinụlọ ya n'ụlọ dị nso. Dị ka ụzọ njikọ, ọ na -akpọrọ Rio Ferdinand na -eto eto maka ọzụzụ bọọlụ na n'ogige ntụrụndụ obodo.
Nke a bụ n'ihi na obere Ferdy nwere mmasị na football n'oge ahụ. N'agbanyeghị na ọ hụrụ football n'anya, agụmakwụkwọ ka bụ ihe dị mkpa.
Little Ferdy gara Camelot Primary School. N'ụlọ akwụkwọ, ọ lekwasịrị anya na mgbakọ na mwepụ na otu ụbọchị, ọ tụgharịrị na ohere ịme n'ihu ndị na-ege ntị n'oge mmepụta ụlọ akwụkwọ nke Bugsy Malone.
Cristiano Ronaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
N'okwu ya ...“Achọrọ m ime ihe dị iche mgbe m bụ nwatakịrị, ike na-agwụ m nnọọ mgbe ọ bụla - ọbụnadị ịgba bọl ma ọ bụ soro ndị di na nwunye m kpakọrịta Ya mere njem nke ụlọ, izute ndị ọhụụ. It Ọ masịrị m.
Little Ferdy mesịrị họrọ ịga Blackheat School nke Bluecoat iji mee ka ndị enyi ọhụrụ wee biri nke ọma, na-enwe obi ike na-eto eto dị ka a hụrụ n'okpuru.
Ole Gunnar Solskjear Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma
Ferdinand nwere anụ ahụ anụ ahụ, na -ekere òkè ọ bụghị naanị klaasị na egwuregwu mgbatị ahụ kamakwa ihe nkiri, ihe nkiri na balet. Ọ bụ nwata nwere mmeri nke meriri agụmakwụkwọ: ọ nọchitere anya Southwark na mgbatị ahụ na Egwuregwu Ntorobịa London.
Dị ka o kwesịrị, site na afọ 10, a kpọrọ ya ka ọ zụọ ọzụzụ na Queens Park Rangers agụmakwụkwọ ebe nrọ bọọlụ ya malitere.
Ike Ferdinand nwere ike ịgba bọlbụ pụtara ìhè dịka nwatakịrị: mgbe ọ dị afọ 11, onye nkuzi ntorobịa ya, David Goodwin, kwuru: “Aga m akpọ gị Pelé, nwa m, ọ masịrị m igwu egwu.”
Ferdinand malitere n'ezie dị ka onye na-awakpo onye na-egwu egwu, Otú ọ dị, ndị na-egwu egwuregwu ya hụrụ na onye na-eto eto nwere ike ịnọnyere ịbụ onye etiti.
Ndị otu London West Ham United ga -abụ ụlọ ịgba bọọlụ ya, mana ọ sonyere na usoro ntorobịa ha na 1992.
Na 1994, ọ na -egwuri egwu n'akụkụ Frank Lampard. Ferdy nwere ọganihu site na nwata wee mee ọkachamara ya na Premier League na 1996.
Ntozu zuru oke bịara mgbe mbinye ego mgbazinye ego nye Bournemouth ma nyefee ya na Leeds United. Nke a mere ka Manchester United kpọọ ya na 2002. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ndụ mmekọrịta Rio Ferdinand:
Rio lụrụ nwunye ya nwụrụ, Rebecca Ellison. Ọ bụ onye nkụzi na-ahụ maka ahụike nke zutere onye na-agba bọọlụ Rio Ferdinand mgbe ọ na-egwuri egwu na West Ham na njedebe 1990s.
Obi gbawara Ferdinand mgbe nwunye ya ọ hụrụ n'anya nwụrụ na 2015, ọ dị naanị afọ 34. Ma olee otu o si nwụọ? Gịnịkwa bụ akụkọ ya? Anyị lere ndụ ya anya…
Site na Essex, ọ nọgidere na-adịchaghị ala, emesịkwa zụọ ya dị ka onye na-akwụ ụgwọ tupu ya alụọ Rio na 2009. Rio na nwunye ya nwụrụ Rebecca nwere agbamakwụkwọ ha na Caribbean.
Ọ mụrụ nwa mbụ di na nwunye Lorenz na 2006 na nwa nwoke nke abụọ akpọrọ Tate, sochiri afọ atọ ka e mesịrị.
Ha nabatara nwa nwanyị a na -akpọ Tia na 2011 n'otu oge ezinụlọ ahụ laghachiri na London na -esote ọnụnọ na Manchester mgbe Rio na -egwu United.
Gareth Southgate Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Tupu ya anwụọ, Rebecca debere ọrịa ya na nzuzo mgbe achọpụtara ya na kansa n'afọ 2014. Mgbe ọ gwọchara ọgwụgwọ, o chere na ọrịa ahụ doro ya anya na 2014.
N'ụzọ dị mwute, ọrịa kansa laghachiri gbasaa n'ọkpụkpụ ya. Mgbe a mara ọkwa ọnwụ ya, ọ kpalitere iru uju site na ụwa football.
Rio gosipụtara ọnwụ nwunye ya ọ hụrụ n'anya n'okwu na-agbawa obi nke gụrụ:
“Di ma ọ bụ nwunye m hapụrụ m n'abalị ụnyaahụ. “Rebecca, ezigbo nwunye m, nwụrụ n'udo mgbe ọ lụchara obere ọrịa kansa na ụlọ ọgwụ Royal Marsden na London.
“Ọ bụ ezigbo nne hụrụ ụmụ anyị atọ mara mma n'anya. A ga -eche ya dịka nwunye, nwanne, nwanne nne, nwa nwanyị na nwa nwa. "Ọ ga -anọgide na ncheta anyị, dịka onye ndu na mkpali."
Rio gosipụtara nso nso ọ ga - agwa Rebecca ma ọ bụrụ na ya na ya nwere oge ọzọ. Na-apụta na mgbasa ozi mmetụta uche maka Child Bereavement UK, ọ sịrị:
“Ọ bụrụ na mụ na Rebecca nwere otu nkeji ọzọ, ọ ga-abụ na a ga m ajụ ya ihe ọ chọrọ ka ụmụaka ahụ tolite na ọkwa dị iche iche, nke na-enye nsogbu n'oge uto ha. M ga-agwa ya na m hụrụ ya n'anya. ”
Nwunye Rio Ferdinand - Nwunye Ọnwụ:
A tọgbọrọ Rebecca ka ọ gbasoro emume nzuzo na Kent na Mee 2015. Ọtụtụ ndị otu di ya gara olili ozu, gụnyere onye njikwa Manchester United Sir Alex Ferguson.
Ndị ọzọ na -akwanyekwara ha ugwu bụ Robin van Persie, Edwin van der Saar, Nemanja Vidic na Darren Fletcher. A kọwara ọrụ a dịka mmemme ndụ Rebecca. Ụmụ ya atọ na -ahọrọ egwu a ga -akpọ.
A hapụrụ ha, ha niile na nna ha. Ka okenye abụọ maara ọnwụ nne ha, nwa ikpeazụ ga -ajụ nna ya ọtụtụ ajụjụ gbasara ebe nne ya nọ.
Mmeghachi omume nke Rio na Ọnwụ Ya: Ferdinand kwetara na ọ tụgharịrị ị drinkụ mmanya ozugbo Rebecca nwụsịrị.
Mgbe ọnwụ ahụ gasịrị, Rio kwetara na nke ya “Ụwa dara” ọ na-atụgharịkwa na mmanya na-aba n'anya iji merie iru újú ya, mana ugbu a na-elekwasị anya n'ịbụ nna na-ahụ n'anya nye nwa ya
N'okwu ya ...“Ọ bụ naanị abalị ka nwere ike imegharị m. Ana m eteta n'ụra ruo etiti abalị abụọ nke atọ, mgbe ụjọ ihe ụmụ m tufuru dakwasịrị m ọzọ, na-eme ka m mụrụ anya ruo ụtụtụ. ” Ọnwụ nwunye ya mesịrị mee ka ọ kwụsị ezumike nká site na bọlbụ.
Rio Ferdinand dara mgbe a na-ese ihe nkiri BBC banyere ọnwụ nwunye ya.
Akwukwo ihe elere anya na BBC One huru Rio ka ekwuru banyere ndu ya dika nwayi, nne na nna.
Usoro ihe omume ahụ nyochakwara ka ndị nne na nna nwụnahụrụ na -esi ejikwa iru uju na ịkwado ụmụ ha - wee kesaa otu ụzọ ha nwere ike isi nyere ha aka n'ezie bụ ịkwalite ndụ ha.
Rio zutere ndị nne na nna ndị ọzọ na -alụ ọgụ na -eru uju ma kọwaa ọgụ nke aka ya gbasara ịgbalị ịzụlite ụmụ ya atọ.
Rio Ferdinand Untold Biography Eziokwu - Mmekọrịta Ọhụrụ:
Na nso nso a, a kọọrọ na Rio agbasaala mmekọrịta ya na kpakpando mbụ Towie bụ Kate Wright ma hụ ụzọ ahụ ka ha na-a drinksụ mmanya na ibe ha na London. Kate bụ ọrụ maka iweghachi obi obi Ferdy.
Di na nwunye ahu choro ikpo ka ha wepu onwe ha n'amaghi. Nke a mere ka Kat kwụsịrị ịhapụ TV na Essex mgbe izu ole na ole gasịrị.
Ndụ Rio Ferdinand:
Nke a bụ ezinụlọ Rio Ferdinand nke gụnyere ọtụtụ ndị ezinụlọ ya. Foto ahụ gosiri Sian (nke abụọ site n'aka nri) ka ya na ụmụnne ya ndị nwoke Rio na Anton (aka ekpe na aka nri), nwanne nwoke, nna na nne (etiti) nwere nkọwa.
a 'ndị otu m ruo mgbe ebighi ebi' foto dị mkpụmkpụ n'oge na-adịbeghị anya ka onye òtù ezinụlọ ya gafere. Nne nwanyị Rio Ferdinand nke Irish, Janice Lavender hapụrụ ezinụlọ mgbe ọ dị obere na 50.
Dị ka e kwuru na mbụ, nne ya nwụrụ anwụ malitere ịlụ nwoke Julian Ferdinand, bụ onye toro na St Lucia, dị ka onye na-eto eto na ha mechara nwee ụmụ abụọ, Rio na Anton. Nkewa ha muru ya Lavender.
Ha abụọ biri na kansụl ụlọ na Peckham na ọ lụghị nwanyị. Mgbe ha kewara, Janice mechara lụọ Peter St Fort, onye ya na ya nwanyị nwere nwa nwanyị, Sian na nwa nwoke, Jeremaya.
Rio kelere Janice dị ka "Nnukwu" ma kwuo ya "Esiri ya ma kpochaa, ma kpalie eluigwe na ụwa iji hụ na mụ na nwanne m nwoke bụ nwanne m bụ Anton na-aga ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ndị na-eto eto na oge".
Mama Ferdy diri ịkpa ókè agbụrụ n'oge ya na nna ya. Dị ka Ferdy si kwuo ya..."Mgbe ha na nwoke na nwanyị na-akpa, ndị na-agafe agafe agafe na Nne n'ihi na ọ na-eji oji ojii apụ. "
A kọwara nne Rio Ferdinand Janice St Fort dị ka a 'nne raara onwe ya nye' na 'mmụọ nsọ. Na 2017, ọ nwụrụ mgbe ọgụ kansa gasịrị. A kọwara ya dị ka 'idé nke ezinụlọ' Janice St Fort dị afọ 58 mgbe ọ nwụrụ n'ụlọ ọgwụ ya na ezinụlọ ya n'akụkụ akwa ya.
Tupu ya anwụọ, Janice Lavender nwere nnukwu nsogbu mgbe ọ na-ele ụmụ ya anya ka ha na onye ọ bụla na-agba ọsọ agbụrụ na onye isi England bụ John Terry.
Anton Julian Ferdinand (amụrụ 18 Febụwarị 1985) bụ onye egwuregwu bọọlụ bekee nke na -egwu Southend United dịka onye na -agbachitere ya. Dịka nwanne ya nwoke, ọ bụ ngwaahịa sitere na agụmakwụkwọ West Ham United.
N'otu oge, e boro ya ebubo John Terry jiri obi ọjọọ kpọọ onye na-agbachitere Queens Park Rangers Anton, 'f ****** black c ***' n'oge egwuregwu n'October 23.
Ụmụ nwanyị Rio Ferdinand:
Akụkọ ifo ndị England na nke mmadụ enweghị ụmụnne nwanyị. Ha bụ; Sian (n'etiti aka ekpe), Chloe (etiti aka nri), Anya (n'isi aka ekpe) na Remi Ferdinand (n'isi aka ekpe). Sian mara mma karịa ndị ọzọ.
Rio Ferdinand Untold Biography Eziokwu - Rackpa ókè agbụrụ:
N'otu oge, ndị uweojii na Derbyshire kwuru na ha na-enyocha ihe mbụ si n'aka Rio Ferdinand mgbe ha natara mkpesa sitere n'aka ndị ọha na eze.
A ghọtara okwu 'choc ice' pụtara 'ojii na mpụga, ọcha n'ime. N'isochi mkpebi FA ahụ, ụmụnna mere ngagharị iwe nke ha site na ịjụ iyi akwa T-shirts iji kwado mkpọsa nke ịkpa oke agbụrụ Kick it Out.
Rio Ferdinand Biography Eziokwu - Ọdịdị vidiyo:
Na 2000, Ferdinand dị mkpirikpi pụtara na vidio a na-ese foto na Ayia Napa na Cyprus na ndị na-agba ọsọ na-asụ Bekee na Kieron Dyer na Frank Lampard.
Ọwa 4 wepụtara obere vidiyo dị ka akụkụ nke akwụkwọ akụkọ S*x, ndị egwuregwu bọọlụ na Videotape n'afọ 2004, na -ekwu na ejiri ya mee ihe. "Na-echetara onye na-ekiri na nke a dabeere n'ezi ndụ".
Na 2002, n'oge a na-ekpe ikpe gbasara mmejọ nke onye ha maara Martin King, Ferdinand na onye ọrụ ibe mbụ Leeds Michael Duberry gọrọ ebubo na Duberry metọrọ nwanyị ahụ na Ferdinand yiwara ya egwu na Le-club ịgba egwu Hi-Fi n'abalị nke 22 Jenụwarị, yana ọzọ ebubo nke ịba ụba na ị dụbiga mmanya ókè.
Ndị uwe ojii gbara ndị nwoke abụọ ajụjụ ọnụ mana Servicelọ ọrụ ikpe na-ahụ maka ikpe ikpe mara ọkwa na Eprel 2003 na ha agaghị ebubo ebubo. A mara King na ikpe nke mwakpo na-ekwesịghị ekwesị na ịnwa mmeko nwoke.
Mgbe a gbara ajụjụ ọnụ na redio na Chris Moyles Gosi na October 2006, Ferdinand dọtara mkpesa na nkatọ abụọ site n'aka nwoke nwere mmasị na onye uweojii Peter Tatchell mgbe ọ kpọrọ Moyles otu ebe, na-esote ya "Ọ dị nwute, gbaghara, gbaghara m. Adịghị m egbu egbu”Mgbe Moyles kwuchara na ọ bụ nwoke idina nwoke.
BBC Radio 1 mechara kpochapụ mgbanwe ahụ dị ka mmachi, ebe Tatchell kwuru "Ebe [ọ] rịọrọ mgbaghara n'egbughị oge, enwere m obi ụtọ ịnakwere mwute ma hapụ ya na nke ahụ".
Rio Ferdinand Ashley Cole Egwu:
Achọpụtaghị John Terry na ikpe ikpe agbụrụ megidere ya na nwanne nwanne Rio Anton.
Mgbe mkpebi ahụ gasịrị, Rio Ferdinand kpalitere arụmụka mgbasa ozi site n'igosi ihe ntụrụndụ na ihe onye ọrụ Twitter kwuru. Ashley Cole, onye gbara ama na ihu ọma Terry, dịka "Akpụrụ akpụ", okwu okwu ugha nke a na-aghota ya "Nwa n'èzí, na-acha ọcha n'èzí".
Ferdinand ehichapụrụ tweet n'oge na-adịghị anya ma gọnahụ ya akpụrụ mmiri bụ oge agbụrụ, na-agbakwụnye, "Ma ọ bụrụ na m chọrọ ịchị ọchị ihe onye tweets ... .Mee! Hahahahaha! Ugbu a, kwụsịnụ na-atụgharị ya na ikiri! "
Ndị ọkàiwu Cole kwupụtara nkwupụta na nzaghachi, na-ekwu na ọ gaghị etinye okwu ahụ n'ihu. E katọrọ okwu Ferdinand "Na-enweghị isi" site na PFA isi Clarke Carlisle.
Na August 2012, Ferdinand kpebiri £ 45,000 maka nkwupụta Twitter ya mgbe Ụlọrụ Nlekọta Onwe-ya mere ka ọ mara na ya na-ebute egwuregwu ahụ iji kọwaa ya. "Na-ezighị ezi" okwu nke gụnyere "A na-ezo aka na agbụrụ agbụrụ, agba ma ọ bụ agbụrụ."
Rio Ferdinand Akụkọ nke na - enweghị isi - Jamaica bash:
N'October 2014, FA na-ebu Ferdinand ebubo ọzọ maka iji okwu mkparị na Twitter, mgbe ọ na-ezo aka na nne nke onye nkatọ dịka "Sket", okwu Jamaica na-asụ nwanyị na-akwa iko.
Emechara Ferdinand £ 25,000 maka mmejọ ahụ ma machibido ya igwu egwuregwu atọ. FA tụlere ọnọdụ Ferdinand dị ka a "Nlereanya" iji bụrụ ihe na-ewusi elu maka ugwo, na mgbakwunye na ya ịbụ nke Twitter ugboro abụọ n'ime afọ atọ. Rịba ama: Ọ dịghị mgbe a nabatara mmehie.
Rio Ferdinand Untold Biography Eziokwu - amblinggba chaa chaa:
Na Machị 2015, ekwuputara na Ferdinand ga -abụ ihu ọhụrụ nke cha cha cha cha cha cha cha chara chara cha cha.
Ọkwa ahụ kpalitere nkatọ siri ike na Twitter site n'aka ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya, bụ ndị tụrụ aro na ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị na ihe nlereanya maka ndị na-eto eto ịkwado ịgba chaa chaa ọkachasị nyere mgba nke edere nke ọma ọtụtụ ndị ọgbọ ya nke ịgba chaa chaa mebiri.
Rio Ferdinand Untold Biography Eziokwu - Kgba Ọkụ:
Ozugbo kpakpando Manchester United lara ezumike nká na 2015 mgbe ọ nwetasịrị iko ọ malitere, ọ malitere itinye anya ya n'ọgụ ọkachamara na mgbanaka ịkụ ọkpọ mgbe o mechara ọkwa ịma jijiji ahụ dị ka ọrụ. Akụkọ a bịara naanị afọ abụọ ka ọrịa kansa gburu Rio nwunye ya.
Rio Ferdinand Untold Biography Eziokwu - Bankwọ ụgbọala Banyere Akụkọ Banyere:
Na Machị 2003, enyere Ferdinand iwu ọnwa isii maka ịnya ọsọ karịa ọsọ ọsọ. A kwụrụ ya £ 2,500 na isi ihe isii maka ịkwọ ụgbọala na nkezi nke 92 mph (148 km / h) yana M1.
Na May 2005, otu ọkàiwu katọrọ ya ka ọ nwetara nkwụsị nke anọ ya na ịnya ụgbọ ala na nke ọma nke £ 1,500, mgbe ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii jidere ya. “Na-eme njem na nkezi nke 105.9 mph (170.4 km / h) karịrị otu kilomita nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita abụọ” n'okporo ụzọ M6.
Mgbe ọ na-ekpebi ntaramahụhụ ahụ, ọka ikpe ahụ kwuru Ferdinand "Kwesịrị ịbụ ezi ihe nlereanya maka ndị na-eto eto nọ na ọha mmadụ, nke a anaghị enyekwa ozi ziri ezi".
Eziokwu efu Rio Ferdinand - Onye omenkà:
Na 2005, Ferdinand, ya na otu enyi ụlọ akwụkwọ ochie, mepụtara akara egwu White Chalk Music. Ruo taa, enwere ndị na -ese ihe abụọ bịanyere aka na akara ahụ: Melody Johnston na Nia Jai.
Nke ikpeazụ wepụtara album na 6 Ọktoba 2010, nke nwere ihe egwu Ferdinand.
Dị ka o kwesịrị, mere mbido mbụ ya n'ime ụwa sinima na ngwụsị afọ 2008, na -akwado ego ma bụrụ onye isi na -emepụta ihe nkiri Alex de Rakoff Nwụrụ Anwụ Na -agba ọsọ.
Ihe onyonyo a gosiputara Danny Dyer na 50 Cent na nkata ndi ohi. Ferdinand ga -ekerịta kredit mmepụta ya na onye otu egwuregwu England Ashley Cole.
Na 2008, Ferdinand sere ihe nkiri banyere Peckham, na-achọ ime ka ụmụ na-eto eto pụọ ná ndụ mpụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Rio Ferdinand Childhood akụkọ tinyere akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Egwuregwu Bekee nke Bekee
Edinson Cavani Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Steven Gerrard Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Akwukwo Nsogbu
Nwere ike 9, 2021
Harry Maguire Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ